दरवार हत्याकाण्ड भएको पनि वीस वर्ष भयो । तर अझै यो घटना रहस्यमै छ । विवाहको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि युवराज दिपेन्द्रले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, सहित राजपरिवारका सदस्यहरु माथि गोली चलाएर हत्या गरेको भनिएको छ । तर घटना वारे निष्पक्ष अनुसन्धान नभएका कारण धेरै नेपाली झै यो कुरा पत्याउन तयार छैनन् । हत्याकाण्ड अघि नै दरवारमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भविश्यवाणी एक जोगीले गरेको तथ्य फेला परेको छ। यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित हुने छ ।
विसं २०५८ जेठ पहिलो साताको कुरा हो । बीपी पुत्र श्रीहर्ष कोइराला बालुवाटरस्थित कार्यालयमा व्यस्त थिए । खत्री थरका एक व्यवसायी हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुगे । तिनताका श्रीहर्षका काका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने उनी आफैँ पनि कृषि विकास बैंकका सल्लाहकार ।
कृषि र कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने व्यवसायी कल्याण खत्रीले भने – ‘‘श्रीहर्षजी १ व्यवसायमा मलाई धेरै नोक्सानी भयो, कृषि विकास बैंकमा अलिकति ऋण छ मिनाह गराई दिनुपर्‍यो ।’’ श्रीहर्ष भन्दै थिए – ‘यार मैले कसरी मिनाह गर्न सक्छु रु’ धेरै कर गरेपछि उनले खत्रीलाई भनिदिए ‘‘ठीक छ निवेदन हाल्नुस् के गर्न सकिन्छ म प्रयास गर्छु ।’’
श्रीहर्षले भने – ‘‘कता जोगी ९ज्यौतिषी० भेट्न जाने यार १ म परेँ आईटीको मान्छे । ज्योतिषीमा विश्वास छैन । किन भेट्नु ।’’ मनमनै उनी सोच्न थाले ‘‘कतै ज्योतिष भेटाउने बहानामा आफ्नो ऋण मिनाह गर्न मलाई प्रभावित गर्ने रणनीति त होइन ।’’
श्रीहर्ष : आएको त थाहा छैन ?
श्रीहर्ष : छक्क पर्दै मनमनै ९अब के उन्नति, कस्तो उन्नतिको कुरा गरेको होला रु मैले कुनै लाभको पद पाउने हो कि रु पैसा कमाउने हो कि ?
त्यसपछि श्रीहर्षले जोगीलाई सोधे – “हैन तपाइँलाई सबै कुरा थाहा छ भने आफैँ राजा र प्रधानमन्त्री ९गिरिजावावु०लाई भेटेर यो सबै कुरा किन भन्न सक्नुहुन्न ?”
ज्योतिष विद्यामा विश्वास नभएका कारण श्रीहर्षले त्यो दिनको घटनाबारे कसैसँग कुरा गरेनन् । पत्नी रुचिरालाई मात्र जोगीले भनेको कुरा सुनाए।
जोगीले भनेबमोजिम घरमा परेवाको हुल आउन थालेपछि एकाबिहानै श्रीहर्ष बालुवाटारतिर लागे । रिसाए रिसाउनुहुन्छ काका ९प्रधानमन्त्री० सबै कुरा सुनाउँछु भनेर । त्यो दिन प्रधानमन्त्री कोइराला निवासबाट बाहिरिइ सकेका थिए । भेट हुन सकेन । देशको प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हुने नै भयो । फेरि कुनै बेला भेट भयो भने भनौँला, भन्दै फर्किए उनी ।
केहीदिन श्रीहर्षले काकालाई भेट्न पाएनन् । विसं २०५८ जेठ १९ गते शुक्रबार राति प्रेम उपाध्यायले आत्तिएर फोन गरे – ‘‘दरवारमा गोली चल्यो रे को को मरे रु राजारानी मरे भन्छन् ।’’ राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष विश्ववन्धु थापाका नातेदार प्रेमको भनाइमा पत्यार लागेन । श्रीहर्षले भनिदिए ‘‘तिमी बौलायौ कि क्या हो रु यो राति खाएर नचाहिने कुरा गर्ने हो ?’’
अनि डीएसपी मिलन बस्नेतले समेत फायर खोले । स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि अंगरक्षक ९क्याप्टेन० सुनील श्रेष्ठ एक हातले प्रधानमन्त्री कोइरालाको कम्मरमा समाएर जिउको सुरक्षा गर्दै अर्को हातले हवाई फायर गर्न थाले ।
त्यो घटनाबारे प्रधानमन्त्रीका निजी सुरक्षाकर्मी महेन्द्र मरासिनीले लेखकलाई सुनाए – ‘स्थिति कति भयानक भइदियो भने बल प्रयोग नगरे उहाँको ज्यान जाने खतरा आइलाग्यो । कुनै विकल्प नभएपछि बाध्य भएर हामीले फायर खोलेका हौँ । घटनामा २१ राउन्ड हवाई फायर भएको थियो । फायर खोल्दासमेत स्थिति नियन्त्रणमा आएन । सुरक्षाकर्मीहरु भन्न थाले हैन – अब त गोली पनि सकियो के गर्ने रु’